Imigomo Nemibandela, Ubumfihlo GDPR / CCPA, Warranty - 01 / Jun / 2021
Zonke izintengo zethu ziyi-E & OE, futhi zingashintsha nganoma yisiphi isikhathi.
Zonke izintengo zethu zikhonjiswa ngokukhethekile kwi-VAT kanye nezindleko zezimpahla kuphela. Izindleko zezimpahla zizokhonjiswa kubhasikidi wakho wokuthenga njengoba usebenzisa iwebhusayithi yethu futhi uboniswa kuphela nge-VAT.
Inkinga esibhekene nayo
I-HHO IQINISO, i-LTD (IRELAND) ithengise ikhasimende (lapha "ikhasimende") ngezinhlu eziphrintiwe, amaflaya kanye nesitolo se-inthanethi eshiwo izimpahla kule mibandela elandelayo yokulethwa nokuthengisa (AGB).
Isivumelwano esiphakathi kwekhasimende ne-HHO IQINISO, i-LTD sivela kuphela nge-oda lekhasimende nokwamukelwa kwalo yi-HHO IQINISO, LTD cishe. I-oda lamakhasimende elenziwa nge-Intanethi. I-HHO IQINISO, i-LTD yamukela i-oda lekhasimende (a) isiqinisekiso se-oda (nge-imeyili noma nge-imeyili) noma idluliselwe (b) ilethe izimpahla ezi-oda (kufaka phakathi ukulethwa).
Noma yimiphi imininingwane mayelana nezimpahla ikhasimende ngesikhathi senqubo yoku-oda aligcini ukubopha. Ikakhulu, ushintsho ekubumbeni nakwezobuchwepheshe, ezithuthukisa ukusebenza komkhiqizo, kanye namaphutha encazelweni, imifanekiso, namanani entengo. Yonke imininingwane yezobuchwepheshe emikhiqizweni ngayinye isuselwe kulwazi olunikezwe ngumenzi futhi luyimpoqo kuloluhlaka.
Zonke izintengo zekhathalogi ziyizintengo zomhlahlandlela ezilungiswa ngokuqhubekayo emakethe. Ukwi-Euro €, ngaphandle kwe-VAT, Okungaxhunyiwe. Izindleko zokuhamba nokupakisha zibalwa ngokwehlukana. Inkokhelo kufanele ikhokhwe inetha kungakapheli izinsuku eziyi-10 ngemuva kokukhokha. Amakhasimende amasha angathenga kuphela uma kubhekwa isheke lasebhange, noma kusengaphambili kwemali. IHHO FACTORY, LTD (IRELAND) iyaligodla ilungelo lokuthengisa kumakhasimende akhona ngokusebenzisa la mathuba okuthenga.
Singakhokhisa kuphela i-3.4% Khokha ngemali yekhadi lesikweletu noma lebhange lokukhanselwa nemali yokucubungula icala lokukhanselwa. wamukela lemibandela ngesivumelwano sale oda
Iphutha Iwaranti nesikweletu
Kuwo wonke amayunithi aphambili anikezwa kukhathalogi, isikhathi sesiqinisekiso yiminyaka emi-2 ngempilo yesevisi yeminyaka eyi-1,000 14 yento yokwakhiwa kwe-resin kusukela osukwini lokuthenga, ngaphandle kwalapho isikhathi sewaranti esihlukile sishiwo ngokusobala (imvamisa izinsuku eziyi-XNUMX). Ngokwazi okuvunyelwe ngumthetho kungafakwanga, isikweletu sesinxephezelo. Ikakhulukazi, i-HHO FACTORY, LTD Active HHO Carbon Cleaner ngeke ibe nesibopho sanoma imuphi umonakalo odalwe ukusetshenziswa okungafanele noma ukuwohloka kwemvelo noma ukulimala okungabangelwa entweni uqobo komonakalo olandelayo. Idiphozi ayibuyiswa! Ngokufakwa okufanele nokusebenza kwamakhithi we-HHO wezimoto, ungasithumelela izithombe noma ividiyo emfushane ngaphambi kokuqala injini ukuqinisekisa iwaranti. Uma umonakalo ubangelwa ukufakwa okungafanele noma ukuguqulwa okungafanele, iwaranti iba yize. Khweza i-Amp Booster ku-FRONT ye-Radiator, kanye / noma ku-COOLAIRFLOW OUTSIDE ENGINE BAY NOMA IMFAZWE IQHAWULILE. Sijabule njalo ukweluleka mahhala. Ngaphansi kwebhonethi okungaphezu kuka-40 ° Celsius (104 Fahrenheit) akunconyiwe! Indawo esehlile kuphela kude nenjini. Ukufakwa egumbini labagibeli nebhuthi yemoto akuvunyelwe.
Isexwayiso: Ngaphambi kokuqala injini, qiniseka ukuthi i-hose ayivinjelwe yiqhwa, isikhundla esibi sediski yendlela eyodwa, noma i-hose ephukile ebangelwa ukufakwa okungafanele. Ukuvimba okukhishwayo kwegesi ye-HHO kubhubhisa ngokungenakuphikiswa iyunithi ephambili ye-HHO futhi akunakuphindiselwa noma kubuyiselwe imali.
Ubumfihlo be-GDPR - European Union
IHHO FACTORY, LTD iqinisekisile ekuqoqeni, ekusetshenzisweni nasekusebenziseni imininingwane yomuntu, izinhlinzeko zoMthetho Wokuvikelwa Kwemininingwane Yase-Ireland kanye namazinga afanele omthetho okufanele agcinwe. Isikhathi sokucutshungulwa kwe-oda, idatha yamakhasimende ekhiqizwayo isetshenziselwa ucwaningo lwangaphakathi lwemakethe kuphela. Ukudluliselwa ezinhlanganweni zabalingani besithathu kuzokwenzeka kuphela lapho ukulethwa okufanele kwezinsizakalo (ukuhlelwa kwe-oda) kuphoqelekile. Ikhasimende liyavuma lokhu kusetshenziswa kwedatha yalo. Ngaphezu kwalokho, uyatholakala nganoma yisiphi isikhathi lapho ecela ilungelo lokusebenzisa imininingwane egcinwe ngaye nokuvimbela ukusetshenziswa kwayo ngezinjongo zocwaningo lwangaphakathi emakethe.
Ubumfihlo CCPA - California, USA
Amalungelo akho ngaphansi koMthetho Wobumfihlo Wabathengi baseCalifornia - Umthetho Wobumfihlo Wabathengi waseCalifornia (CCPA) ukukunikeza amalungelo maqondana nokuthi idatha yakho noma imininingwane yakho iphathwa kanjani. Ngaphansi komthetho, izakhamizi zaseCalifornia zingakhetha ukuphuma "ekuthengisweni" kwemininingwane yabo yomuntu siqu kubantu besithathu. Ngokuya ngencazelo yeCCPA, “ukuthengisa” kusho ukuqoqwa kwedatha ngenhloso yokwakha ukukhangisa nokunye ukuxhumana. Funda kabanzi ngeCCPA nangamalungelo akho obumfihlo.
Ukubusa kanye noMthetho Osebenzayo
Uma kuthengiswa kumakhathalogu okuphrinta, amaflaya nesitolo esiku-inthanethi kuphela lezo ze-HHO FACTORY, izimpahla ze-LTD ezichazwe ngokwenziwa kwazo ngesikhathi sesivumelwano ngasinye zisayiniwe. Le migomo nemibandela isebenza ikakhulukazi lapho ihluke kuleyo yamakhasimende okufanele ngabe ikhona. Ukulethwa kwesoftware kubuye kufakwe kudiski kanye / noma imininingwane equkethwe kulesi Sivumelwano selayisense ngumenzi. Ngokuvula imininingwane evaliwe, ikhasimende lamukela ubuqiniso balezi zimo ngokucacile. Uma noma yikuphi ukuhlinzekelwa kwalezi Zimo kusebenza noma kungasebenzi, ngeke kuthinte ukusebenza okusemthethweni kokuhlinzekwa okusele. Futhi igcina ilungelo ngaso sonke isikhathi I-HHO IQINISO, ukuguqulwa kwe-LTD kwale migomo nemibandela.
Kuwo wonke amayunithi aphambili anikezwe kukhathalogi, isikhathi sesiqinisekiso unyaka owodwa kusukela ngosuku lokuthengwa, ngaphandle kokuthi isikhathi esihlukile sesiqinisekiso sichazwa ngokucacile (ngokuvamile izinsuku eziyi-1). Uma izimvume zomthetho zingafakwa, isikweletu sesinxephezelo. Ikakhulu, i-HHO IQINISO, i-HHO Carbon Cleaner engahlanzekile ayizukukhokhiswa noma yimuphi umonakalo odalwe ukusetshenziswa okungafanele noma ukugqwala kwemvelo nokudabula noma ngomonakalo ongadalwanga entweni ngokwayo owonakalisayo. Idiphozithi ayibuyiselwa! Ngokufakwa okufanele nokusebenza kwamakhithi we-HHO wezimoto, ungasithumelela izithombe noma ividiyo emfushane ngaphambi kokuqala injini ukuqinisekisa iwaranti. Uma umonakalo ubangelwa ukufakwa okungafanele noma ukuguqulwa okungafanele, iwaranti iba yize. Sijabule njalo ukweluleka mahhala.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi uma ihhovisi labathengi kwamanye amazwe licekela phansi lokhu kuthunyelwa, ngeke sibe nesikweletu futhi imali ekhokhwayo izokhanselwa.